Biyo la'aanta Photoshop | Hal-abuurka Online
Laura Carro | | Photoshop, Textures, Tricks
Maanta waan arki doonnaa sida loo sameeyo saamayn taas oo u dhiganta dhibcaha roobka dusha kasta oo aad qiyaasi karto.
Dhibcaha roobka ayaa noqon kara mid dhab ah sida ay u alifeen sawirada xayaysiinta qaarkood, ama kuwa kale. Maanta waxaan sharxi doonaa sida loo hindiso iyaga, iyo sida looga dhigo kuwo run ah intii suurtagal ah.
Marka hore waxaan samaynaa a xulashada qaab wareeg ah.
Iyada oo ku xidhan aragtida aan waafajino doorashada ka saarida xad dhaafka oo leh xulashada geeso badan. Ka dib waan buuxinaa xulashada lakabka cusub.
Lakabkaan waxa aad sii wadeyso inaad sameyso waa laba jeer guji oo daaqada pop-upka waxaan dooraneynaa ikhtiyaarka Bevel iyo Emboss.
Waxa aanu kaaga tagnay shaashad leh sifooyinkii aanu dooranay, si aad u hesho hab-raac aad ku raacdo, haddii ay dhacdo in aad ku jahawareerto inta qoto dheer, dhalaalka ama hadhku si aad ah u dhaqan geliso.
Markii horeba lagu dhejiyay Bevel iyo Emboss, waxa soo socdaa waa ka saar buuxinta midabka lakabka, isaga oo ka tagaya mid hufan laakiin leh saameyn muuqata, waxaad ku arki doontaa ikhtiyaarka "opacity" xulashadan oo leh magaca "Buux".
Marka aan aragno dhibicda biyaha oo leh hufnaanteeda, waxaan arki doonnaa inay lagama maarmaan tahay in wax laga beddelo, kiiskan. waxaan isticmaalnaa tirtiraha waxaanan ka saareynaa xoogaa hoos u dhac ah ilaa ay naga qanciso. Qaarkiin ayaa arki doona baahida loo qabo in wax badan laga saaro, kuwa kale si ay uga tagaan sida ay tahay. Tani waxay sidoo kale ku xiran tahay nooca sawirka aan u isticmaalno asalka, iyo aragtidaada.
Marka aynu haysanno dhibicdii diyaarsan, waxaynu samayn karnaa milicsi. Tani waxaynu qaadanaa dhibicda, nuqul ka samee oo ku dar lakab kale oo dheeraad ah; lakabkan ugu dambeeya ayaa na caawin doona "Lalaabi sawirka" iyo in saamaynta lakabka aan nuqul ka samaynay aanu hadda ahayn saamayn, laakiin qayb ka mid ah sawirka. Tani waxay u adeegtaa si marka aan u rogno sawirka, sifooyinka aan hore u dhignay dhibicda lama hayo. Kadibna leh Ctrl + E, waxaan isqabnaa La mid ah, in la haysto lakabka nuqulka ah iyo lakabka cusub ee la doortay wakhtiga la riixayo amarradaas.
Ugu dambeyntii kaliya Waxaan nuqul ka samaynaa (ctrl + J) dhibicda iyo milicsigeeda oo waanu yaraynaynaa ama waynu balaadhinaynaa oo ku wareegaynaa, markaa halkii mid, waxaan yeelan doonnaa dhibco badan oo sawirka oo dhan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Biyaha ayaa ku dhaca Photoshop
Barnaamijyada ugu fiican ee fiidiyowyada laga sameeyo
Adobe wuxuu bilaabayaa Lightroom cusub oo si buuxda daruur u leh CC